Anjanapara dia tanàna ao aminny kaominina Ambanivohitra Alakamisy Anativato, Distrikanny Betafo, faritra Vakinankaratra. 25Km eo ho eo raha miala anAntsirabe no miankandrefana toy ny ho any Betafo. Eo aminny PK17 aminny lalam-pirenena faha 34 RN34 no mivily mianatsimo manaraka lalan-tany izay tody any Tritriva.
Vice président: Patrice Fokotany:Ambohinaorina Président: Dada Gaby District:Ambohidratrimo Region:Analamanga. Mairie: Tina be Commune Rurale:Fiadanana Raha miala eo aminny PK15 RN1 eo Alakamisy Fenoarivo dia mande lalantany 7km eo, misy fokotany 12. Commune ambanivohitra tena mamokatra "légumes sakay, anana isankarazany,voatabia.Anisanny tanana betsaka Voasary ihany koa io toerana io, ary mbola malalaka tany azo anitarana ny renivohitra, fa ny mampalahelo dia ifaninananireo maire amidy aminy sinoa ny tany
Ny herinandro dia tsingerim-potoana izay fitambarana andro maromaro tsy mihoatra ny iray volana na ny tsingerim-bolana iray. Ny herinandro misy fito andro mifanesy no tena be mpampiasa. Ny iray volana dia misy efatra herinandro mahery kely raha fito andro ny iray herinandro ary ny iray taona misy 52 herinandro mahery kely. Arakaraka ny safidinny fanjakana na ny fiangonana na ny vahoaka tsirairay dia mety hanomboka aminny andro Alahady na Alatsinainy na andro hafa ny herinandro. Ireto avy ny anaranny andro ao aminny herinandro misy andro fito: Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy, Zoma, ...
Ny Tetiandro hebreo dia tetiandro ampiasaina ao aminny fivavahana jiosy sy ny Fanjakani Israely ankehitriny. Tetiandro manaraka ny fihodinny Volana sy ny Masoandro ny tetiandro hebreo, ka ny iray volana dia miovaova ho 29 na 30 andro. Misy iray volana fanampiny izay asisika isaky ny telo taona satria tokony ho feno ny tsingerim-potoana 19 taona atao hoe Tsingerini Metona. Avy aminio tetiandro io no nahazoana ny Tetiandro jiosy izay ampiasainny Fanjakana Israeliana. Ny totalinny andro ao anatinny taona iray dia mety ho 353, 354 na 355 raha tsy misy iray volana fanampiny, faha-13. Marihina f ...
Ny Fetinny Trinite na Alahadinny Trinite dia fety ankalazana anAndriamanitra tokana misy persona telo, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tao amin’ny Fiangonana voalohany, dia tsy nisy fomba fivavahana manokana na andro manokana natokana ho an’ny Trinite Masina. Nefa rehefa niely ny arianisma izay noheverina ho fampianaran-disoni Ariosy dia nanomana fankalazana omban-kira fiderana sy hira ifamaliana, hira mialoha hotononina aminny Alahady ny Rainny Fiangonana. Ankalazaina aminny Alahady voalohany aorianny Pentekosta ny Fetinny Trinite ao amin’ny Fiangonana Tandrefana ary amin’ny ...
Ny demony araka ny finoan ny fivavahana maro, dia zavaboary tsy hita maso manana hery ratsy mahatonga ny fahaverezan ny olombelona entiny hanao ny ratsy. Ao amin ireo fivavahana abrahamika dia iantsoana ireo fanahy na anjely nanaraka an i Satana na Devoly nikomy tamin Andriamanitra ny demony. Ao amin ireo fivavahana ireo sy ny fivavahana maro hafa koa dia heverina fa afaka mipetraka amin olona ny demony ka ilana ny famoahana na ny fandroahana azy. Ny anarana hoe Demony koa dia matetika asolo ny hoe Satana na Devoly, indrindra rehefa ampiasaina hilazana zavatra tokana sy ialohavan ny mpanor ...
manaja ny nentin - drazana dia andro fahenina izy raha manomboka amin ny Alakamisy ny herinandro. Ny teny malagasy hoe Talata na Atalata dia avy amin ny
dia andro faharoa ny Zoma raha andro voalohany ao amin ny herinandro ny Alakamisy Ny teny malagasy hoe Zoma na Azoma na Joma dia avy amin ny teny arabo
mandala ny nentin - drazana dia andro fahatelo izy raha manomboka amin ny Alakamisy ny herinandro. Tany Gresy fahiny ny andro Asabotsy dia antsoina hoe κρονία
hafa. Ny Ntaolo malagasy sasany dia nampanomboa ny herinandro amin ny Alakamisy Arakaraka ny tetiandro ampiasaina ny isan ny andro ao anatin ny herinandro
Kristy sy ny Fitsanganan i Kristy tamin ny maty dia manomboka amin ny Alakamisy hariva amin io herinandro io ka mifarana amin ny harivan ny Alahadin ny
distrika misy kaominina roa ambin ny folo, ambonivohitra sy ambanivohitra: Alakamisy Ambatomanoina Amboasary Ambohibary Ambongamarina Analaroa Anjozorobe
SimulRadio ilay onjam - peo. Alatsinainy - Alakamisy 10: 00 ny 13: 00 Zoma 10: 00 12: 00 Be Smart Alatsinainy, Alarobia, Alakamisy dia UMEDA Hit 10 Japoney, Tandrefana
Anjanapara dia tanàna ao amin ny kaominina Ambanivohitra Alakamisy Anativato Distrikan ny Betafo, faritra Vakinankaratra. 25Km eo ho eo raha miala an Antsirabe
président : Patrice Mairie : Tina be Raha miala eo amin ny PK15 RN1 eo Alakamisy Fenoarivo dia mande lalantany 7km eo, misy fokotany 12 Commune ambanivohitra
ao amin ny herinandro misy andro fito: Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy Zoma, Asabotsy ary Alahady. Ny fizaràna ny fotoana ho tsingerim - pito
fiangonana manaraka ny tetiandro gregoriana. Ny nifidianana ny andro Alakamisy dia fanarahana ny voalaza ao amin ny Filazantsara Marka sy Lioka sy
Alarobia Yom Khamishi יום חמישי izay midika hoe andro fahadimy Alakamisy Yom Shishi יום ששי izay midika hoe andro fahenina Zoma Yom Shabbat